News By Big Boss
Habargidir.info- Tan iyo markii loo doortay Muungaab gudoomiya gobolka Banaadir iyo duqa magaaladda Mogadisho waxa uu bilaabay in uu si aan ganbasho laheeyn u cunsuruyeeyo dhallinyarada wax baratay ee beesha Habar gidir ee ka shaqeeyo gobolka Banaadir. Muungaab waxa uu shaqooyinka gobolka badankood siiyay dhallinyarada beesha Abgaal, waxyaabaha ay la yaaban yihiin dhallinyarada Habargidir waxaa ka mid ah in xitaa qofkii iyaga ah oo shaqo loo magacaabo uusan xafiiska shaqada uu ku magacaaban yahay ka socoto uusan imaan karin, halka shaqada uu qabanayo qof Abgaal ah. Waxaa Xamar ka socda abaabulo ay wadaan dhallinyarada Habargidir kaas oo la doonayo in lagu muujiyo qabyaaladeeynta qaawan ee lagu haayo ee ay hormuudka ka yihiin Muungaab iyo Hassan Sheikh. Siyaasiyiinta Abgaal waxa ay garan waayeen in aysan Soomaalidu is nacbeeyn ee waxa la isku dilay oo dowladii jirtay loo buburiyay ay aheed cadaalad daro iyo nin jecleeysi, arinta noocaas ahna ku danbeynayso burbur. Sanadihii u danbeeyay beesha Habargidir waxaa ku dhacay hoos u dhac ku yimid miisaankoodii siyaasadeed taas oo loo aneeynayo Habargidir oo huwatay shaati Hawiye, iyaga oo iska dhaadhiciyey in kursiga dalka ugu sareeyo uu fadhiyo nin Hawiye ah sidaas daradeedna Dawladda lala shaqeeyo maadaama ...
Dhageyso: Afar Wariye oo Muqdisho lagu Maxkamadeynayo
Maanta oo Axad ah ayaa lagu wadaa Maxkamada Gobolka Banaadir in lasoo taago Gudoomiyaha Guud ee Warbaahinta Shabelle iyo Saddex Wariye oo kala ah Agaasimaha Radio SKY-FM Maxamuud Carab, Tafaftirha ...
Topnews:-Qeybdiid oo odaynimo aan looga baran sameeyay – Qarda jeexiisii Docol.
Cabdi Qeybdiid waa dagaal ooge madax adag hasse yeeshee todobaadkaan wuxuu sameeyay odaynimo iyo biseel aan looga baran kadib markii uu dagaal uu la galo Ciidanka Gelinsoor ka doorbiday inuu ...
Topnews:-Qeybdiid oo Gelinsoor laga celiyay – Dagaal dhexmaray labada Ciidan oo is horfadhiya?
Cabdi Qeybdiid oo ka mida hogaamiye kooxeedyada wali hubeeysan Somalia ayaa dib uga laabtay Gelinsoor kadib markii Ciidan taabacsan Madaxweyne Tima kalajeex jidka u galeen,iyagoo ku riday rasaas iskugu jirtay ...
Topnews:-Beelaha Habargidir iyo Majeerteen oo Ciidankii ugu badnaa Galkacyo geeyay – Qax ka biloowday ?
Ciidamo wato gawaarida dagaalka kana baxay Guriceel,Cadaado,Dhuusamareeb ,Bandiiradley ,Gelinsoor iyo Ceelgaras ayaa gaaray Koofurta Galkacyo halka dhinaca kalena ay Ciidan lixaadleh buux dhaafiyeen Waqooyiga Galkacyo kuwaas oo ka yimid Bosaaso,Qardho,Burtinle ...
© 2014 Habargidir Community - All rights reserved.